Umthandazo womfi. ? Isikhumbuzo, ukuThandeka sishiyiwe kwaye sihle
Ukuthandazela umfi. Kuyo sinokucela loo miphefumlo isendleleni yokuphumla okungapheliyo ukuze bafumane uxolo abaludingayo ngexesha elifutshane kakhulu.
Ngokuqinisekileyo abaninzi bethu babandezelekile ukufa yomntu osondele kakhulu, ayinamsebenzi nokuba wayelilungu losapho okanye umhlobo, into ebalulekileyo kukuba akasekho kulomhlaba, uye kubomi basemva kobomi.
Kuthiwa xa ungamthandazeli umfi, siyakulibala xa kufuneka sihambe ngaloo ndlela.
Abanye abantu bahlala bekhanyisa amakhandlela kwaye benze isibingelelo esikhethekileyo sokukhumbula umntu wabo xa bephakamisa imithandazo.
Nangona kunjalo, le nkolelo ihlala igxekwa kakhulu ngabo bangakuqondiyo kwaye bangaphantsi ngokomoya. Aba bantu abaviwa, ngaloo ndlela sigcina iintliziyo zethu zicocekile.
1 Yintoni ethandazelwa ngabafi?
1.1 Ukuthandazela umntu oswelekileyo
1.2 Imithandazo yokuba ifile
1.3 Ukuthandazela abangasekhoyo kwisikhumbuzo sabo
1.4 Umthandazo wamalungu osapho aswelekileyo (Katolika)
2 Ngaba imithandazo iya kumenza kakuhle umfi?
Yintoni ethandazelwa ngabafi?
Kukho inkolelo yokuba, amaxesha amaninzi, abantu abaswelekileyo bebengalungiselelanga ukujongana neliya ilizwe, yiyo loo nto ke sisezandleni zokuphakamisa imithandazo yokuba umntu oswelekileyo afumane ukuphumla okungapheliyo.
Kukholelwa ukuba kuloo ndlela, umntu ofileyo unokuhlambulula umphefumlo wakhe ngengqondo engcwele efana nomthandazo.
Ngokwesiqhelo kulisiko ukwenza eminye imithandazo emva kokungcwatywa komntu oswelekileyo, nangona kunjalo akwanelanga ukuqhubeka nale imithandazo Ixesha elide kwaye oku kuyanceda ukulila kunye nentlungu ngokwahlulwa komzimba kwelungu losapho okanye umhlobo.
Kusenza siziva ngathi sidibene ngaphandle komgama.
Thixo, nguwe wedwa umnini wobomi.
Usinika isipho sokuzalwa sinenjongo kwaye ngendlela efanayo xa siyifezekisile, usibizela kubukumkani bakho boxolo, xa ucinga ukuba injongo yethu kweli lizwe sele yenziwe.
Nokuba ngaphambili nasemva ...
Namhlanje ndinqwenela ukuvela phambi kwakho ngentobeko enzulu kwaye ngokuqinisekileyo isicelo sam siya kuvakala.
Namhlanje ndifuna ukubongoza umphefumlo womphefumlo (igama lomfi) obuye wambiza ukuba aphumle ecaleni kwakho.
Ndiwuphakamisela lo mthandazo, enkosi, kuba nakwezona zivunguvungu zimbi kakhulu uluxolo olungenasiphelo. Bawo wanaphakade, unike ukuphumla kwiparadesi yomphefumlo wakho kunye nobukumkani bakho kwabo sele bewushiyile lo moya emhlabeni.
UnguThixo wothando kunye nokuxolelwa, uxolele ukusilela nezono zalo mphefumlo ngoku esecaleni kwakho kwaye umnike ubomi obungenasiphelo.
Kwakhona ndiyakucela ubawo, kuba bonke abo kuye kwafuneka benze isijwili sokusuka komntu ongasasebenziyo, vula intliziyo yakho kwaye ubabameme nothando lwakho. Banike ubulumko, ukuze babe nokuqonda okwenzekayo.
Banike uxolo ukuze bazole ngexesha lobunzima. Banike i-discacity ukuba boyise ukudakumba.
Enkosi mhlekazi, ngokundimamela namhlanje ngalo mthandazo ukuba ndizinikezela kuwe ngokuzinikela, ukuze ngenceba noxolo, ubanike uxolo abo bangenalo ngelixesha.
Khokela amanyathelo abantu abaqhawula ngoku kwaye ubenze bonwabe ebomini.
Enkosi Bawo, amen.
Ngaba uwuthandile umthandazo wabafi?
Emva kokubhubha, kukho abo baqinisekisiweyo, ukuba omnye umzuzu wokuhlanjululwa unokuphila, ukuba ayisiyiyo yonke into elahlekileyo kodwa yokuba sinenye ithuba.
Kwilizwi likaThixo sibona ezinye izalathiso zokufumana ukuxolelwa kweli lizwe okanye apho liya kuza khona; UYesu Krestu ngokwakhe uyithetha kwenye yeentlanganiso zakhe ezingummangaliso.
Yinyani apho singenakuphunyuka kuyo, ngaphandle kokuba siyatyala kwaye ngomso omnye umntu uya kusenzela ngendlela efanayo.
Owu Yesu, indawo kuphela yokuthuthuzeleka kwiintlungu ezingapheliyo zentlungu, kuphela kwentliziyo yokuphelelwa lithemba okubangelwa kukufa.
Ewe, Ndikhoyo, owalibonayo izulu nomhlaba, kunye nabantu, bambona esentlungwini.
Wena, Nkosi, okhale ngezibongozo zesisa somntu osithandayo
Wena, owu Yesu! ukuba nemfesane ngenxa yesijwili sendlu eyaphukileyo, neentliziyo ezincumayo kuyo ngaphandle kokuthuthuzela;
Wena, Bawo onothando kakhulu, uvelana nazo iinyembezi zethu.
Zijonge, Nkosi, ukuba ligazi lini na lomphefumlo oxhwalekileyo, ngokulahlekelwa ngoyena mntu umthandayo, umhlobo othembekileyo, umKristu ozimiseleyo.
Zijonge, Nkosi, njengomrhumo esiwunikela ngomphefumlo wakho, ukuze ucoce ngegazi lakho elixabisekileyo kwaye uthathe ngokukhawuleza ezulwini, ukuba awukayonwabeli ngalo!
Zijonge, Nkosi, ukuze usinike amandla, unyamezelo, ukuvumelana nentando yakho kolu vavanyo lukhulu luhlukumeza umphefumlo!
Jonga kubo, oh kamnandi, owu Yesu onobuhlobo! kwaye basinike ithuba lokuba abo apha emhlabeni baphile baboshwe ngamxokelelwane omeleleyo wothando, kwaye ngoku sizilile ukungabikho komntu okwethutyana, sidibana kwakhona kunye nawe ezulwini, ukuze siphile ngomanyano ngonaphakade kwiNtliziyo yakho.
Ngaphandle kwamathandabuzo, intle ukuthandazela izithandwa zakho.
Eyona mithandazo mihle yeyomntu oswelekileyo yileyo yenziwa ngokusuka entliziyweni nalapho sinokuvumela khona zonke izinto esizigcina entliziyweni.
Siyabuza kukuphumla kwakhe okungapheliyo, ngenxa Ndingafumana uxolo into oyifunayo
Kwelinye icala nathi sicela ukuba asizalise ngamandla kwaye sikwazi soyise ixesha elinzima esinokuthi sidlule kulo.
Kukho eminye imithandazo enokuthi isebenze njengesikhokelo, ngakumbi kula maxesha apho amagama angaphumi ngenxa yentlungu nosizi.
Ukuthandazela abangasekhoyo kwisikhumbuzo sabo
Owu Yesu olungileyo, othe ebomini bakho bonke wasenzela iinceba zentlungu zabanye, jonga ngenceba kwimiphefumlo yabo sibathandayo abasePuratori.
Owu Yesu, obathandayo bakho ngokuzimisela okukhulu, yiva ukutarhuzisa esikwenzayo kuwe, kwaye ngenceba yakho ubanike abo ubathathe ekhaya ukuba bonwabe ngonaphakade esifubeni sakho infinito Molweni.
Banike, Nkosi, ukuphumla okungapheliyo kwaye kwanga ukukhanya kwakho okungapheliyo kungabakhanyisela.
Imiphefumlo yabathembekileyo ihambile, ngenceba kaThixo, ingaphumla ngoxolo.
Ukuba ufuna ukuthandaza kwilungu losapho, lo ngumthandazo ofanelekileyo ngabafi.
Ukukhumbula ilungu losapho okanye umhlobo osweleke ngomhla obalulekileyo, kwiimeko ezininzi, akunakuphepheka.
Kungenxa yokuba ibiyimicimbi yokubhiyoza kwaye ayisiyiyo loo mntu uziva elilize, nangona kunjalo kukho imithandazo okanye imithandazo ekhethekileyo ekufuneka yenziwe ngaloo mhla.
Ingaba usuku lokuzalwa, umtshato okanye ezinye omnye umhla obalulekileyo.
Into ekhethekileyo malunga nayo yonke le nto kukungayilibali kwaye ubuze naphina apho ukhoyo ukuthula makube luxolo kwaye Qhubeka ubomeleza abo bashiye kwindiza yasemhlabeni.
Ngamanye amaxesha kulisiko ukudibana namanye amalungu osapho kwaye kuphakanyiswe imithandazo kwiyunithi, khumbula ukuba igama likaThixo lithi ukuba babini okanye abathathu babe sane bacele into egameni likaYesu, uBawo osezulwini uza kuyinika loo nto. isicelo esenziwe.
Umthandazo wamalungu osapho aswelekileyo (Katolika)
Thixo, wena uxolela uxolelo lwezono kwaye ufuna ukusindiswa kwabantu, siyabongoza ngenceba yakho ukuba ubancede bonke abazalwana kunye nezihlobo abasuke kulo mhlaba.
Banike ebukumkanini bakho ubomi obungunaphakade.
Lo ngumthandazo wabantu abafileyo, kodwa mhle kakhulu!
Ukuthandazela ongasekhoyo yenye yezona nkcubeko zindala zineecawe zobuKristu el mundo, iye yaba yimfundiso yokukholelwa ukuba abafi bakwindawo abahlanjululwa kuyo ukuze bangene UBukumkani bamazulu.
Le yindawo yokuphumla eyenzelwe nguThixo ngokukodwa, oku kubonisa uthando olungenasiphelo iNkosi enalo ebantwini.
Yibani kunye njengentsapho Ukuthandazela ilungu losapho eliswelekileyo okanye ukucela i-Mass apho sinokwenza khona imithandazo ekhethekileyo kunye nemithandazo kunye nabahlobo kunye namanye amalungu osapho sisiko.
Oku kukwasebenza njengentuthuzelo, njengophawu lokuba asilulibalanga usapho lwethu kwaye ukuba siyaphinda sihlangane.
Ngaba imithandazo iya kumenza kakuhle umfi?
Injongo yomthandazo wabafileyo kukuba. Cela uncedo, uncedo, ukhuseleko kunye lonwabo ngenxa yaloo mntu ungekhoyo kuthi.
Iya kwenza kakuhle kuphela. Ukuba uthandaza ngokholo nangothando olukhulu kuya kuzisa izinto ezininzi ezintle, zombini zomntu oswelekileyo kunye nezakho.
izigaba Iidayos, Iintlobo ezahlukeneyo Ukuhamba kwetikiti